Wiil shan iyo toban jir ah oo loo soo qabtay dilkii Yacquub C/laahi ee Noorweey lugu dilay - iftineducation.com
Wiil shan iyo toban jir ah oo loo soo qabtay dilkii Yacquub C/laahi ee Noorweey lugu dilay
aadan21 / December 7, 2016
iftineducation.com – Wararka eeynu ka heleeyno dalkaasi Noorweey ayaa sheegaya in habeenimaddii xalay oo arbaco soo galeeysay la soo qabtay wiil 15 jir ah oo ka dambeeyey dilkii wiil soomaali ah oo lugu dilay magaaladda Kristiansand ee Koonfurta dalkaasi Noorweey.
Booliska dalkaasi oo maanta warsaxaafadeed qabtay ayaa sheegay ineey soo qabteen wiilkaas shan iyo toban jirka ah ee dilay Yacquub C/laahi.
Booliska waxaa kale oo ay sheegeen ineeysan jirin cid kale oo qeyb ka ah dilkaasi balse ay tahay arrin xanuunkeeda leh in cida falkaasi geeysatay tahay qof da’yar. Boolisku waxaa ay meesha ka saaran in dilkii macalimada Tone Ilebekk uu shan iyo tobankaasi ka dambeeyo. Waxaa kale oo ay warsaxaafadeedku boolisku ku sheegeen in labada wiil aysan ka dhaxeeyn aqoon, marka laga reebo in hal naadi oo kubada cagta ah ka wada tirsanaayeen, laakin aan isku koox aheyn sababo xagga da’da oo kala weyn. Booliska waxaa ay ka gaabsadeen in sharxaad badan ka bixiyaan sababta keentay in Yacquub la dilo.
Goobta uu shilka ka dhacay oo aheyd agagaarka iskuul halkaas ku yaal, ayaa booliska sheegeen in labada wiil eeysan dhigan jirin balse loo maleeynayo in baska Yacquub raacay uu isagana gees ka saarnkaa 15 jirka dilka geeystay. Booliska ayaa weli raadinaya cidda loo maleeynayo in Yacquub uu kula kulmi lahaa iskuulka uu shilka ka dhacay agtiisa.
Tone Ilebekk, waxaa ay aheyd macalimad iyadana isla galabtaas lugu dilay mindi agagaarka iskuulka, qudheeda ma aaanu aheyn macalimad ka tirsan iskuulka lugu dilay agtiisa, waxaa ay ka shaqeeneysay iskuul gaar loo leeyahay oo aan ka fogeyn deegaan ahaan. Balse ay bartanka kaga soo dhacday xaalad aan la ogeyn sababta mindida loogu dhiftay. Ugu dambeeyntina 15 jirkan dilka geeystay ayaa xalay ku cawo bariistay xarrumaha dadka dhimirka la’a, waxaana uu sheegay in falkaasi uu keligiis geeystay.
HABLAHA AFRICA IYO KUWA CARABTA KU NOOL YAA TOP AH
Daawo: Kama qeyb geli doono tartanka quruxda mar kale